ဖုန်းနံပါတ်မလိုပဲ Facebook ကို 100% အလွယ်ဖွင့်နည်း - အမျိုးကောင်းသား
Home » Android » Android App » Facebook » အမှတ်တရ » ဖုန်းနံပါတ်မလိုပဲ Facebook ကို 100% အလွယ်ဖွင့်နည်း
Direct Download l Dropbox l Copy l Dev-Host
gmail နဲ့ ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ်တောင်းလိမ့်မယ်။ကဲ.....စကြစို့ နော် :D
၃။First Name.......စတာတွေဖြည့်ပေးလိုက်ပါ။New E-Mail မှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့လိပ်စာထည့်ပါ။ @mail.ru ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
"I don't have cell phone" ကိုရွေးပါမယ်။
၇။နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ Facebook အကောင့်ဖွင့်ဖို့ ပဲကျန်တော့တယ်။ကဲ.......Facebook app ထဲဝင်လိုက်ပါ။
(အခုအပေါ်က နာမူနာဖွင့်ထားတဲ့အကောင့်ကို ဦးရာလူ ယူချင်တဲ့သူယူသွားနိုင်ပါတယ်။နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင်ပေါ့ :D)
Email လိပ်စာက lovingyou.missingyou@mail.ru
Password က Myanmar123
Facebook ရဲ့password လည်း Myanmar123 ပါ။
အသုံးလိုလို့ယူသွားရင်လည်း comment လေးတော့ရေးခဲ့ပါနော်။ယူပီးကြောင်းနောက်လူတွေသိအောင်လို့ ပါ။အဆင်ပြေပါစေ။
ပို့ စ်ရေးသားသူ-Khit TaMhine(www.facebook.com/Khit TaMhine)
အဆင်မပြေတာတို့ရှိရင် ကျွန်တော့အကောင့်ကို အချိန်မရွေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ပြန်လည်တင်ပြသူ ခေတ်သမိုင်း အချိန် 2:15:00 PM
ခေါင်းစဉ် Android, Android App, Facebook, အမှတ်တရ
Solai Man April 4, 2014 at 3:05 PM
ခေတ်သမိုင်း April 4, 2014 at 6:06 PM
Mail လိပ်စာမှားသွားလို့:D
Bo Bo ko April 4, 2014 at 7:00 PM
အကိုယ်ပြောသလိုလုပ်တာ မရပါဘူး ph no. တောင်းနေပါတယ်
ခေတ်သမိုင်း April 5, 2014 at 7:48 AM
Facebook ကဖုန်းနံပါတ်တောင်းတာလား၊မတောင်းပါဘူးဗျ၊mail ထဲမှာ facebook ကလှမ်းဖို့ ထားတာလေး confirm လုပ်ရဦးမှာနော်၊တစ်ဆင့်ချင်းသေချာပြန်လုပ်ကြည့်ပါလားခင်ဗျာ။
ခေတ်သမိုင်း April 5, 2014 at 8:22 AM
Facebook အကောင့်လိုချင်သူတွေရှိရင် ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်၊ကွန်မန့် လေးပေးခဲ့ပါနော်၊လိုချင်တဲ့ mail လိပ်စာနာမည်လေးပါရေးခဲ့ပါနော်။gmail ပြောတာဟုတ်ဘူးနော် :D ။facebook အကောင့်လုပ်ပီးရင် gmail ကနေ ပို့ ပေးလိုက်ပါမယ်။gmail လိပ်စာလေးတွေထားခဲ့ပါနော်။
july April 5, 2014 at 3:33 PM
please give meafacebook account i not facebook so please my gmail is julysoe08@gmail.com
ခေတ်သမိုင်း April 5, 2014 at 5:46 PM
ဟုတ်....ကျွန်တော်လုပ်ပီးရင် gmail ထဲလှမ်းပို့ ပေးလိုက်ပါမယ် :)
ခေတ်သမိုင်း April 5, 2014 at 7:29 PM
အကောင့်မရတဲ့သူတွေတစ်ခုလောက်အကြံပေးမယ်နော်၊ mail ကို @mail.ru နဲ့ မဟုတ်ပဲ တခြား@bk.ru တို့ နဲ့ ဖွင့်ပါ၊ပီးရင် facebook မှာ friend ကို အနည်းဆုံး ၁၀ ယောက်လောက်နဲ့page 10 ခုလောက် like ထားပါ၊ပီးရင် သူလုပ်ခိုင်းတဲ့ profile အကြောင်းတွေ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ။
yuki ko April 6, 2014 at 11:56 PM
ကျွန်​​တော်​မလုပ်​တတ်​ဘဲဖွင့်​တာများ​နေပါပြီ။တန်းလန်း​တွေချည်းထားခဲ့တာ။မဖျက်​တတ်​လို့ပါ။ကျွန်​​တော့်​အတွက်​အကိုအားရင်​တစ်​ခု​လောက်​ဖွင့်​​ပေးပါဗျာ။ကျွန်​​တော့်​gmailက hongue3187ပါ။ fb name password အကိုအဆင်​​ပြေရာဘာဖြစ်​ဖြစ်​ပါ။အကိုအားရင်​ကျွန်​တော်​တို့လိုbegineer အတွက်​အသုံးပြုပုံpdf​လေးတင်​ပြီးသင်​​ပေးပါဦး။​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​ဗျာ။ျ
yuki ko April 7, 2014 at 12:04 AM
အကိုအားရင်​ကျွန်​​တော့်​အတွက်​တစ်​ခု​လောက်​ဖွင့်​​ပေးပါဦး ။my gmail =hongue3187. Fb accအတွက်​name password အကိုအဆင်​​ပြေရာ ဘာဖြစ်​ဖြစ်​ပါ။ကျွန်​​တော်​တို့လို beginner အတွက်​ သုံးနည်းpdf​လေးတင်​​ပေးပြီးသင်​​ပေးပါလား။​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​။ကျွန်​​ဆော်​အရင်​ဖွင့်​တာမလုပ်​တတ်​လို့တန်းလန်း​တွေထားခဲ့တာများ​နေပါပြီ။ဖျက်​လဲမဖျက်​တတ်​လို့။ခုနည်းနဲ့လဲconfirm လုပရင်​browserနဲ့ဆက်​သွားချုင်းပြီးph​တောင်း​နေလို့။code လည်းပြန်​မလာလို့ပါ။ကူညီ​ပေးပါဦးဗျာ။
ခေတ်သမိုင်း April 7, 2014 at 8:19 AM
ဟုတ်....အကောင့်ရရင် gmail ထဲပို့ ပေးလိုက်ပါမယ် :)
july April 7, 2014 at 12:48 PM
ယူသွားပါမြီ ကျေးဇူးပါ ဒါပေမဲ app မှာ သုံးမရဘူး Browser ထဲကပဲရတယ် အဲဒါဘာကြောင့်လဲ
zaw maung April 7, 2014 at 4:22 PM
လှိုက်လှိုက်လဲလဲ ကျေးဇူးတင် မိပါတယ်
Khaing Win April 8, 2014 at 2:28 AM
December koko April 8, 2014 at 3:18 AM
Brother .. Facebook အ​ကောင့်​တစ်​ခု​လောက်​
Thwethwe Aye April 9, 2014 at 7:45 AM
ခေတ်သမိုင်း April 11, 2014 at 9:18 AM
Gmail ထဲ ပို့ လိုက်ပါပီ။အဆင်ပြေပါစေ :)
ခေတ်သမိုင်း April 9, 2014 at 7:35 PM
Khaing Win နဲ့December ko ko
Gmail ထဲပို့ လိုက်ပီနော်။အဆင်ပြေပါစေ။
ကျန်တဲ့သူတွေခနာ့စောင့်ပါနော်။လုပ်တာလုပ်ပေးပါ့မယ်။လုပ်ပီးရင်တော့ gmail ထဲလှမ်းပို့ ပေးလိုက်ပါ့မယ် :)
December koko April 10, 2014 at 12:31 AM
​ရှေ့ဆက်​မယ့်​ခရီးမှာ အဆင်​​ဆောင်​ရွက်​နိုင်​​ပြေ စွာ​လျှောက်​လှမ်းနိုင်​ပါ​စေ
Khaing Win April 10, 2014 at 8:32 AM
Dragon linlin April 12, 2014 at 8:07 AM
ကျွန်တော့်ကို fb acc တစ်ခုလောက် လုပ်ပေးပါခင်ဗျာ
ကျွန်တော်လုပ်တာ ၇ ခါ ၈ ခါလောက်ရှိပြီ လည်လည်သွားလို့ပါ
ကျွန်တော့် gmail က dragonthureinlover@gmail.com ပါ
နာမည်ကိုတော့ Black Rose နဲ့လုပ်ပေးပါ မရရင်တော့ အဆင်ပြေသလိုသာလုပ်လိုက်ပါ
mglay thet April 20, 2014 at 3:27 PM
ကျွန်တော်လဲ fb acc တစ်ခုလောက်လိုချင်ပါတယ် name ka snow.weist.နဲ့ပါ ကျွန်တော့gmail ka mglaythet21@gmail.com ပါ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပေးပါ
Rose Nang Nang April 25, 2014 at 1:36 PM
အစ်ကိုကျွန်တော်လည်း fbတစ်ခုလောက် လုပ်ပေးပါဗျာ အမည်က blue numbus
sanaytharlay mdy April 25, 2014 at 3:53 PM
ညီရေ ကိုယ်ကိုလည်း fb အကောင့်တစ်ခုလောက်ပါ....အမည်က Aung Gyi POL ပါ...gmail ကတော့
khantminko77@gmai.com ပါ... ညီ ဒီထက်မက ပညာတွေဖြန့်ဖြူးနိုင်ပါစေ
thu ya April 27, 2014 at 8:03 AM
myowin Tun April 27, 2014 at 11:59 AM
thu ya May 1, 2014 at 7:25 AM
thu ya May 4, 2014 at 6:43 AM
Hanwinaungအမည်နဲ့facebook accဖွင့်ပြီး ကိုယ့်လိုဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုပြန်share ပေးနေတယ် ကျေးဇူးအရမ်းတင် ပါတယ် ညီလေး နောက်ကိုလည်းဒီထက်မကကူညီနိုင် ပါစေ အရာရာအဆင်ပြေပါစေကွာ
Toursimphotos May 6, 2014 at 8:10 AM
facebook account တစ်ခုလိုချင်ပါတယ်။ lightteacher1500@gmail.com သို့ ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူး
physic chit May 6, 2014 at 1:57 PM
ကျွန်​​တော့gmail က physicalachit@gmail.comပါအကို
physic chit May 6, 2014 at 1:58 PM
Fooker Lay May 23, 2014 at 5:32 PM
app ဒေါင်းလို့မရပါအကို ကူညီပါဦး